N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ - Most Recent
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သီတဂူဆရာေ...
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး 22 Dec 2012 တွင် ဟောကြားတော်မူသော "စိတ်အကြောင်း" တရားတော်
Tags: သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး 22 Dec 2012 တွင် ဟောကြားတော်မူသော "စိတ်အကြောင်း" တရားတော် thidagu sidagu ashin nyanissara N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] လက်ပန်တော...
ရန်ကုန်တိုင်း လမ်းမတော်မြို့ နယ်လှည်းတန်းလမ်း ( အောက်လမ်း )မှာ ၃၀.၁၁.၂၀၁၂ (သောင်္ကြာနေ့ )က...
Tags: sidagu လက်ပန်တောင်းတောင်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှု အရေးကို အခြေခံပြီး ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ( ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်ကြပါစေ ) တရားတော် သီတဂူဆရာတော် သီတဂူ thidagu N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ငြိမ်းချမ...
သီတဂူဆရာတော်၏ ထိုင်းနိူင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ဟောကြားခဲ့သော ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံးတို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်...
Tags: ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ညီညွတ်ရေး တရားတော် - သီတဂူဆရာတော် N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ငြိမ်းချမ...
Tags: သီတဂူဆရာတော် - ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ညီညွတ်ရေး တရားတော် N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သာဓုသုတ္တန...
၁၃၇၃-ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း (၁၃) ရက်၊ ၂၀၁၁-ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်၊ သောကြာနေ့၊ ည( ၇း၃၀) နာရီအချိန်၊...
Tags: သာဓုသုတ္တန် ဒေသနာတော် သီတဂူ သီတဂူဆရာတော် ရှင်ဥာဏိသရ sitagu Sayardaw ashin nyanissara nyannitthara thitagu sitagu daythanar day tha nar N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အမြတ်တရား...
အမြတ်တရား(၄)ပါး _ သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ
Tags: အမြတ်တရား(၄)ပါး _ သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ sidagu sayardaw ashin nyannissara nyannisthaya sayartaw N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Summit Speech -Sitagu Sayadaw
Summit Speech -Sitagu Sayadaw
သီတဂူဆရာတော်ကြီးက အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူယောက်မြို့တွင် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ(၂၀၀၀ပြည့်) ထောင်စုနှစ်...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ , သီတဂူဆရာတော် , sitagu sayardaw , tharthanaparla , sarsanaparla , thar tha na par la , sar sa na par la , သာသနာ့ပါလ , သာသနပါလ Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Z - Ashin Zanakarbiwuntha - အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ကြည်ညိုလေ...
Tags: သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ ကြည်ညိုလေးစားဆရာတော်ကြီးများ၏ သြ၀ါဒကထာ သြ၀ါဒ Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - U ThuMinGaLa - ဥူးသုမင်္ဂလ ဒယ်အိုးဆရာတော် ဆရာတော်ကြ...
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ, သီတဂူဆရာတော်, ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ, အောင်ဆန်းဆရာတော်,သာသနာ့ပါလအဖွဲ့ Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / T - Thi Da Gu - သီတဂူ သီတဂူ...
Tags: သီတဂူဆရာတော် Pages: 1234567 of 10